‘Piro yangu idehwe reshato’ | Kwayedza
‘Piro yangu idehwe reshato’
07 Dec, 2018 - 00:12	 2018-12-06T08:13:06+00:00 2018-12-07T00:03:19+00:00 0 Views
Sukulwenkosi Dube-Matutu ari kuGWANDA
YAKAVE batai-batai pamatare edzimhosva eGwanda Magistrate’s Courts, kuGwanda, apo mumwe murume akabudirwa nemudzimu, ndokutanga kuzvonyongoka senyoka mushure mekunge atongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe nemhosva yekuwanikwa aine dehwe reshato zvisiri pamutemo.
Murume uyu anoti anorara akatsamira piro yedehwe renyoka iri kuitira kuti rimuchengetedze.
Anoti akasiirwa nhaka yedehwe renyoka iri nababamukuru vake avo vava mushakabvu.
Memezi Zisiba (36), uyo anogara kuPurpose Mine Compound, kuEsigodini, akashamisa vanhu vaive pamatare apa apo akatanga kuzvonyongoka achiita senyoka ari pasi.
Mushure mechiitiko ichi, akagara pasi achiita seabatwa nemweya. Pakasvika vatori venhau, vashandi vanochengetedza vasungwa kumajeri vaive mushishi rekumudzikamisa asi zvakakona sezvo aitaura navo nehasha.
Vakazoita zvekumutakura ndokuenda naye kunzvimbo yakange isina veruzhinji vachiitira kumupombodza hasha.
Vamwe vaive pachitiko ichi vanoti Bvute akatanga kuita zvisinganzwisike mushure mekunge mutongi apa mutongo wake.
“Abuda mudare aine vanochengetedza vasungwa asi pavafamba mamita mashoma, abva apunzika pasi. Atanga kuzvonyongoka senyoka ari pasi.
“Pane nguva yaambosimudza musoro wake sezvinoitwa nenyoka ndokuurovera pane rimwe bango. Akwira zvakare pane imwe sirabhu (slab) diki sezvinongoitwa nenyoka.
“Tose taramba takatarisa nekushamiswa uye pakutanga hapana ada kusvika pedyo naye. Mumwe mushandi wevanochengeta vasungwa azoita chivindi ndokuenda paanga ari, ndokumudhonza gumbo rake zvikaita kuti ambomira kuzvonyongoka.
“Vazomubatsira kuti agare asi ange akangoputirwa nemweya. Murume uyu atanga kuita zvisinganzwisisike mutongi achangobva kumupa mutongo wake,” anodaro mumwe wevakaona chiitiko ichi uyo akakumbirisa kuti zita rake risaburitswe.
Bvute pakumira kwaakaita mudare iri, haana kupedza nguva sezvo akabvuma kuti akabatwa aine dehwe reshato inova chisikwa chinochengetedzwa pasi pemutemo muZimbabwe.
Mutongi Mark Dzira akabva amutemera kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe azere.
Mukuedza kuzvidzivirira, Bvute anoti akapihwa dehwe reshato iri nababamukuru vake – Vanzeve – avo vakashaika uye anoti vakamuudza kuti rinofanira kugara riri pasi pepiro yaanotsamira pakurara kuitira kuti rigomuchengeta kubva kune zvakaipa zvingamuwira.